အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ - Nyein (Shalom) Foundation
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ (အစီအစဉ်) တာဝန်ဖြင့် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအား တည်ထောင်သူ သိက္ခာတော်ရ ဒေါက်တာ ဆဘွဲ့ဂျွမ်နှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၌ ထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Philadelphia Biblical College မှ B.S in Bible, B.MUS ဘွဲ့ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ Philadelphia Biblical University မှ M.S in Christian Counseling မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ Eastern Mennonite University မှ M.A in Conflict Transformation Program မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ရယူခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပူးတွဲပံ့ပိုးကူညီသူ (Co-facilitator) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အစုအဖွဲ့များ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာအကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ပြီး လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ (အစီအစဉ်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ကာ ဒါရိုက်တာအဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် အဖွဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စရပ်များကို ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုနေသကဲ့သို့ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) ၌ ပူးတွဲပံ့ပိုးကူညီသူ (Co-facilitator) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ EAO-UPDJC တွင် နည်းပညာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည့်အပြင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် (CSFoP) တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Alliance for Gender Inclusion in Peace Process (AGIPP) တွင် တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေစဉ်တစ်လျှောက်တွင် UNDP မှ ချီးမြှင့်သည့် N-Peace Award ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင်လည်းကောင်း၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှ ချီးမြှင့်သည့် Schuman Award ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင်လည်းကောင်း၊ Kachin Consultative Assembly မှ ချီးမြှင့်သည့် Recognition Award ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင်လည်းကောင်း ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာ (မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ)
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် အစီအစဉ်မန်နေဂျာအဖြစ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအား တည်ထောင်သူ သိက္ခာတော်ရ ဒေါက်တာ ဆဘွဲ့ဂျွမ်နှင့် အတူ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ၌ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့ (B.Ag) ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြည့်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ (M.P.A) ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Duke University မှ M.A (International Development Policy) မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားရှိ The University of North Carolina at Chapel Hill မှ Graduate Diploma – International Conflict Management ကိုလည်းကောင်း အသီးသီးရယူခဲ့သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်၍ ဆောက်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ (မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ) အဖြစ် တာဝန်တိုးမြင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် အဖွဲ့အစည်း၏ မူဝါဒရေးရာ ရေးဆွဲပြင်ဆင်မှု နှင့် မဟာဗျူဟာချမှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း၏ အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့တွင် အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ယနေ့ အချိန်အထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေသည့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးဖိုရမ် (CSFoP) တွင် အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Alliance for Gender Inclusion in Peace Process (AGIPP) တွင် Steering Committee Member တစ်ဦးအနေအဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် ရန်ကုန် ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင်လည်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၌ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၃) ရက်နေ့မှစတင်၍ Development Program Coordinator အဖြစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ B.Agr.Sc ဘွဲ့ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Asian Institute of Technology မှ M.Sc (Regional & Rural Development Planning) မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ Centre for Peace & Conflict Studies မှ M.A (Applied Conflict Transformation Studies (ACTS) မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် အစီအစဉ်မန်နေဂျာ (ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး) အဖြစ် တာဝန်ပြောင်းလဲ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ဒါရိုက်တာ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး) အဖြစ် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်များ၊ စီမံကိန်းများကို ကြီးကြပ်ခဲ့ သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖွဲ့စည်းပုံအပြောင်းအလဲအရ ဒါရိုက်တာ (အစီအစဉ်စီမံထောက်ပံ့) အဖြစ် တာဝန်ပြောင်းလဲ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ဒါရိုက်တာ (အစီအစဉ်စီမံထောက်ပံ့) အဖြစ် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ အစီအစဉ်စီမံထောက်ပံ့ ဌာနကို ဦးဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ ကလျာဏမိတ္တဖောင်ဒေးရှင်းတွင်လည်း ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက် နေသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှစ၍ Director Personal Assistant အဖြစ် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် HR & Office Manager တာဝန် ပြောင်းလဲ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်အပြင် Cashier & Treasury တာဝန်ကိုပါ ပူးတွဲထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ရုံးမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ပြောင်းလဲထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပြည်နယ်ရုံးခွဲများနှင့် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တို့၏ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဌာနတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုအရ အစီအစဉ်စီမံထောက်ပံ့ဌာန၏ စီမံရေးရာနှင့် ရုံးများဆိုင်ရာဌာနခွဲကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်ရုံးချုပ် မန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၄) ရက်နေ့မှ ယခုအချိန်အထိ အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Philadelphia Biblical University (ယခု Cairn University) မှ BA (Business Administration) ကို ရယူခဲ့သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း စတင်တည်ထောင်သည့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်ကာ Civic Education Trainer အဖြစ် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူ သိက္ခာတော်ရ ဒေါက်တာဆဘွဲ့ဂျွမ်နှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် မန္တလေး ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ သတ္တဗေဒဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဇွန်လမှ ဇူလိုင်လအထိ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် Civic Education သင်ကြားနည်းစနစ်ကို လေ့လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ မေလအထိ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့တွင် Peace Leadership Training ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ကမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ၌ Peace Making Training တို့ကိုလည်းကောင်း တက်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၌ တာဝန်မထမ်းဆောင်မီ အလယ်တန်းပြရာထူးဖြင့် အစိုးရပညာရေးဌာနတွင် ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ Kachin Baptist Convention (KBC) ၏ ခရစ်ယာန်ပညာရေးဌာန၌ Civic Education Program Coordinator အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် ပင်မရုံးမန်နေဂျာအဖြစ် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ပင်မရုံး၏ ရုံးစီမံရေးရာကိစ္စရပ်များကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ကတည်းက ဦးစီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရ၊ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့၌ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော အစိမ်းရောင် အလင်းတန်းများအဖွဲ့တွင် အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ Reforestation and Community Forest Project in Kachin State စီမံကိန်းတွင် စီမံကိန်းအရာရှိတစ်ဦးအနေဖြင့် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကျေးရွာများတွင် အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုအား ကွင်းဆင်းစည်းရုံးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်း စီမံကိန်း၌ပင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ကာ စီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်တိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလမှစတင်၍ Development for Peace Program တွင် အစီအစဉ်မန်နေဂျာအဖြစ် ထပ်မံတာဝန်တိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်မန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်တွင် အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းစီမံကိန်း၊ သဘာဝသယံဇာတစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနစီမံကိန်း၊ အရေးပေါ်ကာလ ပညာရေးစီမံကိန်းနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးရေးစီမံကိန်းများကို ဉီးဆောင် စီမံခန့်ခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဦးအောင်စဲန်သည် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ Bachelor of Arts in English (B.A (English)) ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ Myanmar Institute of Theology မှ Bachelor of Arts in Religious Study (Business Major) ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် အစီအစဉ်မန်နေဂျာ (သုတေသနနှင့် မူဝါဒရေးရာအစီအစဉ်) အဖြစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ စတင်ကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး ပညာရေးလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်း (KEC)၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပေးရေးစီမံကိန်း (HAP)၊ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများနှင့် သက်ဆိုင်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သည့် စီမံကိန်း (STEP) အစရှိသည့် စီမံကိန်းများကို ဦးဆောင်စီမံလျက်ရှိသည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး MAS_Zinlum Fellowship အပတ်စဉ် (၁) အစီအစဉ်၌ Fellow တစ်ဦးအနေဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိပါဝင်ခဲ့ပြီး Advance Community Development အစီအစဉ်၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ရတနာပုံတက္ကသိုလ်မှ B.Sc (Q) Chemistry ဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် M.Sc (Bio_Chemistry) မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် M.Res (Bio_Chemistry) မဟာသုတေသနဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ Fellowship အစီအစဉ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအထိ စီမံကိန်းအရာရှိအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ စီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Space for Informal Dialogue (SID) စီမံကိန်း၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ စီမံကိန်းမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်တိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ Foundation for Change အစီအစဉ်တွင် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သည့် လူငယ်များအား ပြုစုပျိုးထောင်သည့် အစီအစဉ်တွင် အစီအစဉ်မန်နေဂျာတစ်ဦးအနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်အပြင် မေတ္တာစက်ဝိုင်းစုပေါင်းအဖွဲ့တွင် ပဲ့ကိုင်ကော်မတီတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Pannasastra တက္ကသိုလ်မှ (Applied Conflict Transformation Studies) ဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ မြန်မာစာအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို လည်းကောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ နောင်နန်းကျေးရွာရှိ ကချင်ကျမ်းစာကျောင်းမှ (Licentiate in Theology)ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိ၌ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဋ္ဌာနခွဲ၏ မန်နေဂျာအဖြစ်လည်း ကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျား မ ပေါင်းစည်းရေး (AGIPP) Secretariat Committee Member အဖြစ်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုးနီးရှားနိုင်ငံရှိ Titian Paradamai Institute တွင် Peace Communication ဘာသာရပ်ကို ၉ လကြာ လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Sida နှင့် Indevelop တို့မှ ပြုလုပ်ပေးသည့် UNSCR 1325: Women, Peace and Security ဘာသာရပ်ကို ကမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံရှိ Phnom Penh မြို့တွင်လည်းကောင်း၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိ Stockholm မြို့တွင်လည်းကောင်း လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
AGIPP ၏ Secretariat Committee Member အဖြစ် UNSCR1325: Women, Peace and Security ဘာသာရပ်ကို ပို့ချခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် အစီအစဥ်နှင့်စီမံကိန်းများ၏ မဟာဗျူဟာများ ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြီးတန်းသင်တန်းနည်းပြ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘာသာရေးအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းသင်တန်း (၁၀၀)ကျော်ခန့် ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ National Young Women Christian Association (NYWCA)၊ Charity-Oriented Myanmar (COM)၊ Sandhi Management School နှင့် Local Consultancy Firm တို့အတွက် အချိန်ပိုင်း နည်းပြအဖြစ် ပုံမှန်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာရပ်အထူးပြု အကြီးတန်း သင်တန်းနည်းပြအဖြစ်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ မတူကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၊ ရည်ရွယ်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အလွှာအသီးသီးမှ လူထုနှင့်အတူ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုနီးပါးခန့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၊ သင်တန်းဆရာဖြစ်သင်တန်းများပို့ချရာတွင် အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစတင်၍ အဖွဲ့အစည်းတွင် သင်တန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာ၊ အစီအစဥ်မန်နေဂျာ စသည့် ရာထူးများဖြင့် တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးအလုပ်အဖွဲ့အတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခအသွင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် လူမှုပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲရာတွင်လည်း ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
မြစ်ကြီးနား အဝေးသင်တက္ကသိုလ်မှ B.A. (Geography) နှင့် ကမ္ဘာဒီးယားနိုင်ငံ Pannasastra တက္ကသိုလ်မှ M.A. (Applied Conflict Transformation Studies) တို့ကို ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ B.Sc (Maths) ဘွဲ့ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီမှ ပေးအပ်သော Diploma in Accounting ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်သော Diploma in Management Accounting ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍လည်း မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီမှ ဖွင့်လှစ်သော Certified Public Accounting ကို လေ့လာသင်ယူလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ACCA –UK မှ သင်ကြားသော ACCA ဘာသာရပ်များကို လေ့လာနေပြီး ACCA –II အထိ တက်ရောက်နေသူဖြစ်သည်။
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းသို့မရောက်မီ မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၌ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ စာရင်းစစ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၏ ဘဏ္ဍာရေးဌာန၌ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ Pact Myanmar တွင်လည်း ဘဏ္ဍာရေးမန်နေဂျာအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။